Bogga ugu weyn Waa kuma Architect -ka ugu mushaarka badan | Xirfadaha Dhismaha ee Mushaharka ugu sarreeya ee 2022
Isha sawirka: www.seethewhizard.com
Ma xiisaynaysaa inaad noqoto naqshadeeye? Ma waxaad codsanaysaa inaad ogaato yaa ugu mushahar badan naqshadeeye? Intee in le'eg ayay Architecture u tahay xirfad ahaan iyo sidoo kale dakhliga celcelis ahaan dakhli -yaqaanka? Markaa fiiro gaar ah u yeelo balooggan maaddaama ay dib u fiirinayso wax walba oo ku saabsan berrinka dhismaha iyo guulaha laga helo berrinka.
Architecture guud ahaan waa dhar aad u badan oo bulshadeena huwan. Si otomaatig ah, naqshadeeyayaashu waxay leeyihiin awood aad u weyn oo ay ku beddeli karaan goobteenna si ay u ahaadaan kuwo xagga bilicsanaanta leh oo dareen ahaan naga dhiga inaynu bidix ama midig u leexanno markaan galno meel bannaan ama dhisme.
Sidaa darteed, waxay awood u leeyihiin inay wax ka beddelaan niyaddayada, na dhiirrigeliyaan, kobciyaan bulsho oo kor u qaadaan nolosheenna.
Maqaalkani wuxuu sharxi doonaa dhismayaasha ugu mushaharka badan, xirfaddooda, shuruudaha waxbarasho iyo celceliska mushaharka.
WAA MAXAY QORSHAHA
Dhismayaasha ayaa asal ahaan ku lug leh marxalad kasta oo dhismaha dhismaha ah. Khibradooda waxay ka bilaabantaa marxaladda hore ee fikradaynta ilaa dhammaystirka dhismaha.
Sidaa darteed, naqshadeeyayaashu waxay kormeeraan naqshadeynta dhisme waxayna hubiyaan danta iyo badbaadada dadweynaha.
Marka la soo koobo, shaqooyinka guud ee dhismaha waxay ku jiri karaan wejiyadaas ama doorarka.
Guud ahaan, Architects waxay sameeyaan naqshadda fikradda uu macmiilku bixiyey. Sidaa darteed, qaabkani wuxuu si siman u noqonayaa qorshaha fulinta mashruuca.
Nashqadayaasha ayaa qorshayaal u sameeya xafiisyada, iskuulada sidoo kale waxay bixiyaan qiyaasaha hordhaca ah ee kharashka iyo sidoo kale waqtiga dhismaha mashruuca.
Qorshayaashu waxay muujinayaan muuqaalka dhismaha iyo sidoo kale faahfaahinta gudaha ee dhismaha dhismaha, sawirada nidaamka dhismaha, qaboojiyaha, hababka korontada, tuubooyinka, iyo hababka isgaarsiinta.
Marxaladdan, naqshadeeyayaashu waxay soo saaraan sawirro faahfaahsan, dulmar, miisaaniyad, iyo xeerar la dhawro inta uu socdo mashruuca.
Qof waa inuu fiiro gaar ah u yeeshaa xeerarka amniga, xeerarka qorshaynta maxalliga ah, iyo xaddidaadaha.
Sida muuqata, qofka kaliya ee daciif ka ah inuu sameeyo indha -indheyntaan waa naqshadeeyaha.
Tani waa meesha khubarada khaaska ahi ku dhisaan kooxda dhismaha ee dhismaha naqshada la sameeyay.
Khubaradan waxaa ka mid ah injineero, shaqaale hoose, naqshadeeyayaal, iyo maalgeliyayaal.
Immisa ayuu qabqable leeyahay HESHIIS?
Naqshadayaasha ' Dakhliga ayaa gebi ahaanba ku tiirsan waayo -aragnimo sannado ah, goobta tababarka, iyo aagga takhasuska.
Marka loo eego xogta Maajo 2019 ee Xafiiska Tirakoobka Shaqada ee Mareykanka (BLS), sida caadiga ah, celcelis ahaan Architects waxay kasbadaan mushahar sanadle ah $ 80,750, marka loo eego mushaharka saacadlaha dhexe ee $ 38.82.
Si kastaba ha noqotee, Dakhliga Architects wuxuu u muuqdaa inuu kordhayo markay khibrad ka helaan goobtooda. Sahan ay samaysay PayScale.com ayaa muujinaya xiriirka ka dhexeeya dakhliga iyo sannadaha sii kordhaya ee waayo -aragnimada berrinka.
Sahankani wuxuu go'aaminayaa in;
0-5 sano = $ 51,000
5-10 sano = $ 65,000
10-20 sano = $ 75,000
20+ sano = $ 95,000
10 -KA XAQIIQO EE QAADASHADA UGU SAREEYA
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah xirfadaha dhismaha oo leh heer mushaar oo gaar ah. Sidaa darteed, mihnad -dhisme kasta wuxuu leeyahay qaababkiisa iyo faa'iidooyinkiisa.
Hoos waxaa ku qoran 10 xirfadaha dhismaha ugu mushaharka badan/mushaharka badan;
1) Naqshadeeyaha Dhulka
Naqshadayaasha muuqaalka dhulka ayaa ku takhasusay abuurista naqshadaha muuqaalka iyo kormeerka dhismaha horumarinta muuqaalka mashaariicda ganacsiga, jardiinooyinka, koorsooyinka golf -ka, dhismayaasha xafiisyada, iyo horumarinta guryaha ma -guurtada ah.
Shuruudaha waxbarashada: Shahaadada koowaad ama mastarka ee qaab dhismeedka muuqaalka.
Kuwa kale waa shatiyeynta gobolka oo ay ka mid yihiin dhammaystirka shaqo baradka iyo gudbidda imtixaanka diiwaangelinta naqshadda dhismaha.
Mushaharka Celceliska: $ 28,885 - $ 132,393, Mushaharka Dhex -dhexaadka ah ee Gobolka (BC): $ 67,135
2) Farsamo yaqaanka Architectural
Farsamayaqaannada dhismaha waa khabiir ku siinaya taageero farsamo dhismayaasha xirfadleyda ah iyo injineerada naqshadda madaniga ah ee fulinta cilmi -baarista; diyaarinta sawirrada, qaababka dhismaha, qandaraasyada; iyo kormeerka mashaariicda dhismaha.
Shuruudaha waxbarashada: shahaadada jaamicadda ama bachelor -ka. Kuwa kale waa AUTOCAD ama CD.
Mushaharka Celceliska: $ 39,355 - $ 97,042, Mushaharka Dhex -dhexaadka ah ee Gobolka (BC): $ 58,939
3) Naqshadeeyaha Dhismaha
Naqshadayaasha naqshaduhu waxay soo saaraan sawirrada CAD, bixinta, qaabaynta, iyo looxyada midabka ee mashaariicda dhismaha. Tani waa mid ka mid ah xirfadaha dhismaha ugu mushaharka badan.
Shuruudaha waxbarashada: Bachelor of Architecture
Isugeynta Mushaarka: $ 40,000 - $ 74,000
4) Naqshadeynta Ilaalinta
Naqshadeeyayaasha ilaalintu waxay xoogga saaraan sidii ay u ilaalin lahaayeen dhismayaasha taariikhiga ah qiimo aad u weyn iyagoo samaynaya dayactir iyo dib -u -habayn laakiin waxay ku dadaalaan inaysan beddelin muuqaalka dhismaha.
Shuruudaha waxbarashada: Shahaadada qaab dhismeedka taariikhiga ah
Isugeynta Mushaarka: $ 46,000 - $ 102,000
5) Dhismaha Cagaaran & Dib -u -dhiska Architect
Dhismaha cagaaran iyo naqshadeeyayaasha dib -u -dhiska ayaa mas'uul ka ah naqshadaynta dhismayaasha cusub iyo dib -u -habeynta dhismayaasha jira si loo yareeyo isticmaalka tamarta loona yareeyo saameynta deegaanka.
Shuruudaha waxbarashada: Shahaadada dhismaha, shaqo baradka, iyo sayidyada ee Architecture Green.
Isugeynta Mushaarka: $ 49,908 - $ 93,852
6) Dhisme Ganacsi
Naqshadayaasha ganacsigu waxay kormeeraan mashaariicda horumarinta ganacsiga ee naqshadaynta waxayna ku dadaalaan inay dejiyaan oo ilaaliyaan miisaaniyadda, jadwalka, iyo maareynta hannaanka bixinta mashruuca.
Shuruudaha waxbarashada: 5-sano oo ah shahaadada bachelor-ka xirfadeed iyo tababar shaqo
7) Naqshadeeyaha Warshadaha
Naqshadayaasha warshaduhu waa khubaro ku daraya naqshado, mashiinno, qalab, iyo shuruudaha koodhka dhismaha warshadaha dhismayaasha warshadaha ee shaqeeya, sida warshadaha, dhismayaasha kaydinta, warshadaha korontada, iyo bakhaarada.
Tani waa mihnadlaha kale ee ugu mushaharka badan.
Shuruudaha waxbarashada: shahaadada mastarka ama bachelor -ka ee Architecture iyo barnaamijka internship.
Isugeynta Mushaarka: $ 61,000 - $ 116,000
8) Maareeyaha Architecture
Maareeyayaasha dhismuhu waxay u muuqdaan inay maamulaan dhammaan noocyada kala duwan ee naqshadaha si ay u gaaraan hufnaan badan.
Shuruudaha waxbarashada: ugu yaraan shahaadada bachelorka ee dhismaha ama injineernimada.
Isugeynta Mushaarka: $ 60,169 - $ 150,413
9) Dhisme Sare
Naqshadayaasha waaweyn sida maareeyayaasha ayaa kormeera horumarinta naqshadeynta, soo saarista sawirrada shaqada iyo dukumiintiyada dhismaha ee mashaariicda, iyo sidoo kale ilaaliya miisaaniyadda, jadwalka, iyo gaarsiinta macaamiisha.
Shuruudaha waxbarashada: ugu yaraan shahaadada bachelorka ee dhismaha, iyo shatiyeynta gobolka.
10) Naqshadeeye Xad dhaaf ah
Naqshadayaasha aadka u daran ayaa ku takhasusay mashaariic gaar ah oo aad u dhib badan gaar ahaan mashaariicda cimilada aadka u daran, sida Antarctica.
Tani waa mihnad dhisme kale oo ugu mushaarka badan.
Shuruudaha waxbarashada: Bachelor of Architecture ama Master of Architecture, shaqo barasho, iyo shatiyeynta gobolka.
Mushaharka Celceliska: Injineerada aadka u daran waxay sameeyaan in ka badan $ 100,000+ sanadkii.
Akhri: 10 Shaqooyinka TEFL ee ugu Lacagta Badan 2021
Architect ma samayn karaa malaayiin?
Architect ma samayn karaa malaayiin? Haa, naqshadeeyeyaashu waxay samayn karaan 6 tirooyin oo duurka ku yaal sababtoo ah dabeecadda qaaliga ah ee xirfadda. Si kastaba ha noqotee, fiiro gaar ah u yeelo sidaan u muujineyno sida loo kasbado 6 tirooyin sida naqshadeeye.
Si aad u kasbato 6 tirooyin oo aad u noqoto milyaneer ahaan naqshadeeye, waxaa muhiim ah inaad fiiro gaar ah u yeelato kala duwanaanshaha duurka oo si weyn wax uga tara cadadka dakhliga. Nashqadeeyayaashu waxay kasbadaan mushahar aad u fiican, laakiin dhowr arrimood ayaa horseed u ah kala duwanaansho ballaaran ee heerarka mushaharkooda.
Kala -duwanaanshahaan ballaaran ee dakhliga soo -saareyaasha waxaa saameeya goobta, baaxadda shirkadda, khibradaha sannadaha, heerka waxbarashada iyo ruqsadda.
Marka hore, si aad u guulaysato oo waliba aad malaayiin uga samaysato goobta, shahaadada bachelorka, iyo shahaadada mastarka ayaa la doorbidayaa. Dhammaan naqshadeeyayaashu waxay u baahan yihiin inay ku aflaxaan imtixaanka ruqsadda xaaladdooda shaqo iyo sidoo kale inay haystaan ​​liisanka loo baahan yahay.
Midda labaad, goobta iyo qaababka shaqada naqshadeeyaha ayaa go'aamisa suurtagalnimada sameynta hal milyan oo xirfadda ah. Si kastaba ha noqotee, gobolka waddanka uu ka shaqeeyo naqshadeeye iyo aaggooda takhasuska leh ayaa saameyn weyn ku leh dakhligooda.
Dhismayaasha ugu mushaharka badan waxay u shaqeeyaan shirkado waaweyn oo dakhligoodu yahay $ 15 milyan ama ka badan. Waxay kasbadaan dakhli dhexdhexaad ah $ 104,870. Naqshadayaashaan guud ahaan waxaa laga helaa aagagga waaweyn ee magaalooyinka waaweyn.
Sidaas daraaddeed, naqshadeeye malaayiin ma samayn karaa? Haa naqshadeeye wuu awoodaa. Hoos waxaa ku qoran dulucda naqshadayaasha ugu mushaharka badan adduunka.
10 -KA ARCHITECTS EE UGU SHAQADA BADAN ADDUUNKA
In kasta oo ay adag tahay in la magacaabo hal -abuurka ugu weyn adduunka, haddana waxaa jira dhowr dhise -dhisme oo si weyn loogu muransan yahay inay u tartamaan jagada. Waa kuwan qaar ka mid ah 10 naqshadeeye ee ugu mushaharka badan adduunka;
Maanta, sanadka 2021, naqshadeeyaha ugu dakhliga badan adduunka waa 77 jirka Norman Foster of Foster and Partners. Naqshadeeyaha Ingiriiska Norman Foster waa mid ka mid ah naqshadeeyeyaasha nool ee ugu caansan adduunka.
Anigoo ah shuraakada aasaaska Foster + Partners, inteenna badan waxaan arki doonnaa tusaalooyin shaqadiisa sida The Gherkin building at 30 St Mary Ax, London, iyo The HSBC Building ee Hong Kong, labaduba dhismayaal aad u kala duwan oo dhisme ahaan ka horeeya waqti.
Muddadii uu ku jiray xirfadiisa cajiibka ah, Norman Foster wuxuu ku guuleystay in ka badan 470 abaalmarino xagga naqshadaha iyo naqshadaha.
Waxa uu qaataa mushaar dhan £ 2m sanadkii. 2007, wuxuu sameeyay £ 120 milyan markii uu iibiyey 40% dhaqankiisa. Wali wuxuu leeyahay saamiga 45% ee shirkadda.
Intii uu ku guda jiray xirfadiisa, Sir Norman Foster Net Worth waa $ 200 milyan.
2. Zaha Xadiid
Zaha Hadid waa haweeneyda ugu caansan naqshadaha dhismaha adduunka. Waxay ahayd hormuudkii beddelay naqshadda qarnigii 21aad. Waxaa loo calaamadeeyay inay tahay boqoradda qalooca, iyo haweeneydii ugu horreysay ee ku guuleysatay abaalmarinta Pritzker.
Tani waxay ka dhigtay inay hesho Abaalmarinta Stirling ugu qiimaha badan 2010 iyo 2011 waxaana sameeyay Dame boqoradda Elizabeth II sanadkii 2012.
Dhismayaasha Hadid waxaa si weyn loogu yaqaanaa dheddig -laboodyada qaloocsan iyo joometeriga aan caadiga ahayn.
Laga soo bilaabo Xarunta Biyaha ee London ilaa dhismaha Galaxy SOHO ee ku yaal Beijing, naqshad-dhismeedkan dabbaaldegga ah wuxuu ahaa naqshadeeye la raadinayey dhismayaasha guryaha iyo ganacsiga labadaba. Qaar ka mid ah dhismaheeda waxaa ka mid ah Xarunta HeydarAliyev, Xarunta Biyaha ee London, Guangzhou Opera House, iyo Saldhigga Tareenka ee Afragola ee Napoli.
Xilligii ay dhimatay, Zaha Hadid waxay haysatay qiyaas dhan $ 210 milyan.
Waa mid ka mid ah naqshadaha ugu caansan dunida maanta.
Madxafka Guggenheim ee 1997 ee Bilbao, Spain ayaa laga yaabaa inuu yahay tusaalaha ugu wanaagsan ee qaabkii Gehry loogu dabaqay shaqooyin badan sida Disney Hall ee Los Angeles iyo MIT's Strata Center ee Cambridge Massachusetts.
Dhismaha Louis Vuitton Foundation ee Paris, Farshaxanka Farshaxanka ee Ontaariyo, iyo 8 Spruce Street ee New York sidoo kale waa tusaalooyin shaqadiisa.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan dhismayaasha la dego ee uu naqshadeeyay Gehry waa inay ahaato hoygiisa Santa Monica oo uu weli ku nool yahay.
Frank Gehry wuxuu urursaday hanti gaara oo ku dhow $ 100 milyan.
Frank Lloyd Wright sidoo kale waa mid ka mid ah naqshadeeyeyaasha ugu hal -abuurka badan Mareykanka, naqshadeeye, qoraa, iyo barre adduunka yaqaan.
Wuxuu naqshadeeyay in ka badan 1000 dhisme 70 -kii sano ee uu ku shaqeynayay dhismaha. Wuxuu u hoggaansan yahay falsafadda is -waafajinta aadanaha iyo deegaankiisa oo uu ugu yeeray naqshadda dabiiciga ah.
Natiijo ahaan, wuxuu wax ka beddelay qaab-dhismeedka fikradda qarnigii 20-aad isagoo la yimid qaab-dhismeedka dhammaan Prairie-American-ka kaas oo ka faa'iideystay joomatari nadiif ah iyo sumcaddii xagga durdurka.
Mid ka mid ah shaqooyinkii uu aadka u jeclaa waa guriga Falling water7 oo ku yaal miyiga koonfur -galbeed ee Pennsylvania kaas oo si weyn loogu qiray inuu yahay mid ka mid ah dhismayaasha ugu wanaagsan Mareykanka.
Dhismuhu wuxuu leeyahay balakoonno afar geesle ah, oo ka samaysan biyo -dhac dabiici ah, waxaana loo dhisay qoyska Kaufmanns.
Shaqooyinkiisa kale ee caanka ah waa Solomon R. Guggenheim Museum ee New York, taas oo markhaati u ah sumcadda dhismaha Wright, iyo Huteelka Imperial ee Tokyo.
Waqtigii uu dhintay 1959, hantida Frank Lloyd Wright waxaa lagu qiimeeyay qiyaastii $ 3 milyan, oo u dhiganta qiyaastii $ 30 milyan maanta.
Kani waa naqshadeeye kale oo ugu mushaarka badan.
Akhri: 10ka Shaqaale ee ugu mushaarka badan Macallimiinta 2021
Johnson wuxuu ku biiray waaxda dhismaha ee Madxafka Farshaxanka Casriga ah ee New York si uu u hormariyo xirfadihiisa oo markii dambe 1941 -kii, wuxuu iska qoray Dugsiga Naqshadaynta ee Harvard halkaas oo uu wax ku bartay Breuer iyo Walter Gropius.
Sanadkii 1946 kadib adeegiisii ​​milatari, Johnson wuxuu bilaabay inuu dhiso farsamadiisa dhismaha. Mid ka mid ah shaqadiisii ​​ugu horreysay, Glass House ayaa dariiqa u banneeyay isaga oo noqday astaanta dhismaha casriga ah ee bilaabay mihnadda naqshadda Johnson si ay u iftiimiso.
Dhismayaasha cajiibka ah ee Johnson waa The Crystal Cathedral in Garden Grove, California, The Williams Tower ee Houston, Texas, 550 Madison Avenue, New York, iyo PPG Place ee Pittsburgh, Pennsylvania.
Shaqooyinka kale iyo kuwii dambe ee Johnson waxay ahaayeen munaaradaha Albaabka Yurub ee Madrid oo la dhammaystiray 1996 -kii iyo guryaha is -kaashatada Urban Glass House ee New York oo la dhammaystiray 2006.
Intii uu ku guda jiray xirfadiisa iyo noloshiisa dheer, Johnson wuxuu urursaday hanti markii dhimashadiisa lagu qiyaasay inay ahayd $ 5 milyan.
6. Ludwig Mies van derRohe
Wixii Mies, wuxuu ka walaacsanaa inuu awood u yeesho muujinta ruuxa casrigan casriga ah.
Wuxuu inta badan u isticmaali jiray biraha warshadaha iyo dhalooyinka saxan dhismayaashiisa, taas oo ka muuqata shaqooyinka sida Barcelona Pavilion, Crown Hall, Lakeshore Drive, Villa Tugendhat, iyo Dhismaha Seagram oo lagu gaaray iskaashiga Philip Johnson.
Runtii, Barxadda Barcelona (qaab -dhismeed ku -meel -gaar ah, oo runtii loogu yeero Pavilion -ka Jarmalka oo loo dhisay bandhiggii Barcelona ee 1929) iyo Villa Tugendhat oo ku taal Czech Republic waa laba shaqo oo kasbaday magaca Masterworks -ka Yurub ee qaab -dhismeedka casriga ah.
Qaadashada Mies ee sumcadiisa bilicsanaanta gaarka ah iyo mabaadii'da "hufnaanta" ee ururinta farshaxanka ee agabyada warshadaha casriga ah ayaa ka jiiday indhaha adduunka.
Isticmaalkiisa qaababka tooska ah ee fudud iyo qaababka qorshaysan, khadadka nadiifka ah, adeegsiga saafiga ah ee midabka, iyo ballaarinta booska hareeraha iyo ka baxsan derbiyada gudaha ayaa ka dhigay mid ku gaar ah duurka iyo sidoo kale dhiirrigelin u ah dhismayaal badan oo soo kacaya.
Dhallinyaro badan oo damac leh oo ku guulaystay dhismayaasha casriga ah ee dhammaantood waxay dhammaantood ku tilmaameen Mies inay tahay isha dhiirrigelintooda.
Waqtigii uu dhintay, Mies waxay urursatay hanti shaqsiyeed qiyaastii $ 5 milyan.
7. Muuse Safdie
Wuxuu dhashay July 14, 1938, Safdie wuxuu Jaamacadda McGill ka bartay dhismaha. Buugga sayidkiisa, Habitat 67 wuxuu noqday naqshadda bilaabay xirfadiisa caalamiga ah.
Mashruuca muuqaalka ugu horreeya, Habitat 67 waa bulsho ku -dayasho iyo dhisme guryeyn ku leh Montreal Canada oo cutubyadeeda ay isku dul -taallo oo laga sameeyay shubmo la sii diyaariyey.
Dabcan, astaamihiisii ​​ugu dambeeyay waa Marina Bay Sands iyo Jewel -ka Singapore ee garoonka Changi, Galbeedka Qaranka ee Kanada, YadVashem iyo AlrovMamilla Quarter ee Yeruusaalem, Crystal Bridges Museum of American Art ee Arkansas, Xarunta Kauffman ee Farshaxanka ee Magaalada Kansas .
Moshe Safdie ayaa la rumeysan yahay inuu dhisay hanti shaqsiyeed oo lagu qiyaasay $ 150 milyan.
Midnimada Renzo Piano waxay ku jirtaa xaqiiqda ah inuusan lahayn qaab gaar ah. Waxaa lagu yaqaanaa inuusan lahayn hal qaab, maadaama wax kasta oo uu sameeyo ay ku kala duwan yihiin muuqaalka iyo naqshadda.
Si kastaba ha ahaatee, dhismayaashiisu dhammaantood waa kuwo heer sare leh sida ay u kala duwan yihiin.
Renzo Piano waa naqshadeeye Talyaani ah oo ka dambeeya Shard, oo ka mid ah dhismayaasha ugu quruxda badan London.
Faransiiska gudaheeda, Renzo Piano waxaa lagu amaanaa shaqadii uu ka qabtay Xarunta Pompidou, Genoa, Italy, Biosphere ee Dekedda Hore, Japan, Madaarka Caalamiga ah ee Kansai ee Osaka, iyo Los Angeles, Matxafka Fanka ee Los Angeles.
Sidoo kale, Tokyo, wuxuu u naqshadeeyay Maison Hermes, oo ah dukaanka calanka ee sumadda raaxada Faransiiska Hermes. Dhismuhu wuxuu leeyahay facade ka kooban ilaa 13,000 oo galaas oo marka la iftiimiyo habeenkii u ekaa “siraad sixir ah”.
Hermes Maison waxaa la bilaabay 1998 waxaana la dhammaystiray 2001 oo muujinaya sida ay u adag tahay iyo hawsha dalbashada mashruucu u tahay Hermes.
Wixii Expo 70, ee Osaka, Japan, wuxuu la shaqeeyay qoyskiisa wuxuuna naqshadeeyay Pavilion oo ah qaab -dhismeed khafiif ah oo ka kooban bir iyo polyester la xoojiyay.
Renzo Piano wuxuu leeyahay qiime dhan $ 30 milyan.
Wuxuu ku dhashay 1951, Valencia, Spain, Calatrava waa naqshadeeye, injineer dhisme, farshaxan iyo rinjiile. Naqshadeeyaha Isbaanishka waxaa loogu dabaaldegaa kartida gaarka ah ee naqshadaynta dhismayaasha u eg noolaha nool.
Matxafka Farshaxanka Milwaukee ama Buundada Margaret Hunt Hill ama qafiska feeraha dinosaurs waa laba tusaale oo caan ah oo ah “noolaha nool”. Mashaariicdani waxay kasbadeen dareenka adduunka oo dhan waxayna ka dhigeen mid ka mid ah naqshadeeyeyaasha shaqada ugu caansan maanta.
Khibradiisa dhismaha iyo hal -abuurnimadiisa ayaa lagu muujiyey mashruuca Xarunta Ganacsiga Dunida ee Gaadiidka Hubka oo la dhammaystiray 2016. Dhismuhu wuxuu ku fadhiyaa midab cad oo gudaha ah oo ay ku badan yihiin galaaska galaaska oo u oggolaanaya iftiinka maalintii inuu ku shaandheeyo hoolkiisa weyn.
Iyada oo shaqooyin caan ah laga hayo qaar ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu fiican, Calatrava ayaa la sheegay in uu naftiisa u dhisay hanti gaara $ 35 milyan.
Rem Lucas Koolhaas waa naqshadeeye Dutch ah oo ka qalin jabiyay Dugsiga Naqshadeynta ee Jaamacadda Harvard. Koolhaas waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu saameynta badan waqtigeenna.
Wuxuu ku dhashay 1951, Valencia, Spain, Calatrava waa naqshadeeye iyo aragtiyaha naqshadaha, naqshadeeye, injineer dhisme, farshaxan iyo rinjiile.
Koolhaas waa naqshadeeye ku guuleystay abaalmarinta Pritzker, wuxuu caan ku yahay hal-abuurkiisa hal-abuurka leh. Qaarkood waxaa ka mid ah Xarunta CCTV ee Beijing, De Rotterdam Complex, Matxafka Garage ee Farshaxanka Casriga ah ee Moscow, iyo Shenzhen Stock Exchange ee Shiinaha.
Sannadkii 2015, OMA waxay naqshadeysay Interlace -ka qaybta galbeed ee Singapore waxaana lagu abaalmariyay cinwaanka Dhismaha Sannadka Adduunka ee 2015 World Architecture Festival.
Rem Koolhaas wuxuu urursaday ku dhawaad ​​$ 5 milyan oo hanti shaqsiyeed ah.
Doorka aasaasiga ah ee naqshadeeye waa in la isku daro fikradda, bilicsanaanta, booska, naqshadaha, simmetry, joometeriga iyo dhismaha si loo sameeyo dhisme macquul ah oo lagu qanci karo.
Naqshadeeyaha leh shahaadada loo baahan yahay ee leh shatiga ayaa xor u ah inuu hanti badan ka helo beerta. In kasta oo ay u ekaan karto mid adag, beertu sidoo kale waxaa ka buuxa fursado.
Laga soo bilaabo iftiiminta kor ku xusan, waxay caddaynaysaa macnaha dhismaha, waxa naqshadeeyeyaashu samayn karaan, qiimahooda dakhli ee suurtagalka ah, iyo sidoo kale ka bixitaanka 10 dhisme ee ugu mushaharka badan adduunka.
10ka Lacag ee ugu Anshaxa Fiican ee Maalgelinta 2022| Hagaha Khabiirka
Shakhsiyaadka ciyaaraha (ciyaartoy iyo tababarayaal) ma noqon karaan ciyaartoyga/tababaraha oo wali kaligeed maareeye ah. Sidaa darteed,…
Sida Si Fudud Loogu Bilaabo Ganacsiga Intarneedka 2022
Siyaabo badan, intarneedku waxa uu simay goobta ay ku ciyaaraan milkiilayaasha ganacsiga yar yar meel kasta. Meheradaha internetka ayaa ah…
Ma ka shaqeysaa jawi khatar sare leh? Hadday haa tahay, markaa maqaalkani adiga uunbaa adiga ah. Ma aha in…